Igumbi lokulala eli-4 kwiSiqithi saseManitoulin!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDean
Ifumaneka unyaka wonke, yonwabele ukuhlala ngokukhululekileyo kweli gumbi lokulala le-4, i-cottage yamabali ama-2 engaphantsi kweemitha ezingama-200 ukusuka kolona lwandle lukhulu lwesanti eManitoulin Island, eProvidence Bay. Ifakwe ngokupheleleyo-ilala ukuya kuthi ga kwi-8 kwaye unokufikelela okukhethekileyo kuyo yonke i-cottage!
Nceda uqaphele ukuba sibonelela ngeenkonzo ezongezelelweyo ezihlawulelwayo ukuze uzithenge ngaphambi kokufika kwakho kubandakanya iinkuni zokubasa, umoya wokupholisa umoya, iilinen ezigcweleyo zazo zonke iibhedi, iitawuli zokuhlambela, ibhayisekile & nerenti yekayak.
OKUBALULEKILEYO: Nceda uqaphele ukuba onke amaxabiso abalwa kwaye ayahluka ngokusekelwe kwinani leendwendwe zabantu abadala abaneminyaka eyi-17 nangaphezulu, bonke abantwana abaneminyaka eyi-16 nangaphantsi bahlale simahla. Xa udwelisa inani leendwendwe, nceda ubandakanye kuphela iindwendwe zabantu abadala 17 okanye ngaphezulu ukuze ungahlawuliswa ngabantwana. OKUBALULEKILEYO: Emva kokuba ugcino lwakho luqinisekisiwe, nceda usithumelele i-imeyile ngenani elipheleleyo labantu abadala kunye nabantwana abahlala kwi-cottage, inani eliphezulu leendwendwe lilonke li-8.
4.82 ·Izimvo eziyi-53
4.82 · Izimvo eziyi-53
Indlu yethu ikwiProvidence Bay entle, eOntario kwiSiqithi saseManitoulin. Isiqithi saseManitoulin sesona siqithi sikhulu samanzi amatsha ehlabathini esinembali etyebileyo ye-aboriginal esukela emva ukuya kuthi ga kwi-10,000 BC. IProvidence Bay luluntu lwelali elonwabisayo olumi kwiLake Huron kunxweme olusemazantsi esiqithi eGeorgian Bay. Ifikeleleka ngokulula ukusuka eSudbury (ngaphantsi kweeyure ezi-2) okanye ukusuka eChi-Cheemaun Ferry njengoSouth Bay Mouth kunye neTheminali yeFerry yimizuzu engama-25 kuphela.)
IProvidence Bay idume ngolwandle olunesanti ebalaseleyo kwesi siqithi, enebhodi ebanzi kunye nendawo yokudlala yabantwana. (singasathethi ke ngokunqongophala okwamkelekileyo kweengcongconi kunye neempukane ezimnyama)
I-Providence Bay yeyona ndawo ikhethekileyo kuMntla we-Ontario kuba akukho zimpukane zimnyama kwaye phantse akukho ngcongconi kulo lonke unyaka. Umboniso wonyaka weProvidence Bay Fair ngo-Agasti utsala amawaka abakhenkethi kule ndawo. Lo mngcelele utyhutyha idolophu uvuyisa izihlwele ezihlanganiseneyo. Lo Mboniso ubanjwa ngempelaveki yesithathu ka-Agasti minyaka le. IProvidence Bay ikwaqhayisa ngokutyibilika ekhephini kunye nokuhamba ngekhephu ebusika.
Enye i-plus: yimizuzu engama-25 kuphela ukusuka kwisikhephe eSouth Baymouth.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Providence Bay